အသိအမှတ်ပြု & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
လက်ရှိ Transformers (မှန် CT)
အလားအလာ Transformers (PT, VT)
သတင်းကဏ္ဍ သတင်း & Events
အတွေ့အကြုံ 43 နှစ်အနေဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြု, CIC ထုံးစံလုပ်ထုတ်ကုန် OEM / လိမ္မော်ရောင်န်ဆောင်မှုများ, နှင့်၎င်း၏ဥာဏ်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုက်ညီနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေးထားပါတယ်။
low-ဗို့အားလက်ရှိ Transformers, POS စီးရီး
မိုးလုံလေလုံအသုံးပြုမှုများအတွက် low-ဗို့အားဗဓေလသစ်-insulator တွင်လည်းလက်ရှိ Transformers (Window-Type)
low-ဗို့အား single-core လက်ရှိ Transformers (Rectangular Window-Type), မီတာများအတွက်
Standard: IEC 60044-1 or IEEE For indoor use Rated voltage: ≦ 0.72 kV Frequency: 50/60 Hz AC/BIL: 3/- kV Ith = 40 In/1S Included accessories: two types of metal installation fittings Other specifications and standards available upon request
low-ဗို့အား Dual-core လက်ရှိ Transformers (Rectangular Window-Type), မီတာနှင့်အကာကွယ်ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်
မိုးလုံလေလုံအသုံးပြုမှုများအတွက် low-ဗို့အား Epoxy-Cast ကိုလက်ရှိ Transformers (Window-Type)
အလတ်စား-ဗို့အားကို C-GIS များအတွက် Epoxy ဘုရ်ှကလက်ရှိ Transformer
(Ungrounded စနစ်များအတွက်) မြေပြင်-ပြတ်ရွေ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက် zero-အဆင့်လက်ရှိ Transformers (ZCT)
(grounded စနစ်များအတွက်) မြေပြင်-ပြတ်ရွေ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက် zero-အဆင့်လက်ရှိ Transformers (ZCT)
Standard: IEC 60044-1 or IEEE For indoor use Rated voltage: ≦ 0.72 kV Frequency: 50/60 Hz AC/BIL: 4/- kV Ith = 40 In/1S Other specifications and standards available.
ငွေတောင်းခံလွှာများအတွက် low-ဗို့အားတိုးချဲ့ Range လက်ရှိ Transformers (ERCT)
Standard: IEC, IEEE C57.13 Rated Voltage: Up to 0.72 kV Frequency: 50/60 Hz Ith = 40 In/1S Other Standards and Specifications available upon request
အဆောက်အဦးအပြင်အသုံးပြုမှုများအတွက် low-ဗို့အား Ring ကို-Core ကာကွယ်-အမျိုးအစားလက်ရှိ Transformer (Epoxy-Cast ကို)
အဆောက်အဦးအပြင်အသုံးပြုမှုများအတွက် low-ဗို့အား Split ကို-Core ကာကွယ်-အမျိုးအစားလက်ရှိ Transformer (Epoxy-Cast ကို)
ဘုရ်ှကလက်ရှိ Transformers (အနိမျ့-ဗို့အား)
ကွိုင်ပုံသွင်းထားလက်ရှိ Transformer, 3kV
ဖြတ် Core, 3kV နှင့်အတူ dual-core coil ပုံသွင်းထားလက်ရှိ Transformer
မိုးလုံလေလုံ Epoxy resins လက်ရှိ Transformer
3kV dual-core Epoxy-Cast ကိုလက်ရှိ Transformer
မိုးလုံလေလုံအသုံးပြုမှုများအတွက် multi-Core လက်ရှိ Transformers, 3kV
ဖြတ် Core, 10kV နှင့်အတူ coil ပုံသွင်းထားလက်ရှိ Transformer
Standard: IEC or IEEE Indoor usage Current Ratio: ≦ 400/5A Rated Voltage: ≦ 15 kV Frequency: 50/60 Hz AC/BIL: 34/110 kV Ith = 40 In/1S Burden / Accuracy: 30VA/1.0CL. Approx. Weight:7kg Other specifications available upon request
10kV Multi-အချိုးလက်ရှိ Transformers (လူပျို / dual-core အမျိုးအစားများ)
Standard: IEC or IEEE* Indoor usage; window-type design Available in dual-core and single-core types System Voltage: ≦ 15 kV Frequency: 50/60 Hz AC/BIL：28/75 kV Primary Current: 500～3000A (single-ratio or multi-ratio) Ith = Max 43.3kA/1S
မိုးလုံလေလုံအသုံးပြုမှု 20 ~ 24kV Epoxy-Cast ကိုလက်ရှိ Transformer
20kV Multi-အချိုးလက်ရှိ Transformers (လူပျို / dual-core အမျိုးအစားများ)
Standard: IEC or IEEE* Indoor usage; window-type design System Voltage: ≤ 25 kV Frequency: 50/60 Hz AC/BIL: 50/125 kV Single-ratio and multi-ratio types Dual-core types available Ith = Max 43.3kA/1S
အနောက်တိုင်းမင်ဒါနာအိုဒေသအားလုံးမှတ်ပုံတင်လျှပ်စစ် Practitioner (PEEs, Reese, RMEs) ဖို့,...
4th အနောက်တိုင်းမင်ဒါနာအိုဒေသညီလာခံ, ဖိလစ်ပိုင် 2016